Ny tranga fanatsarana finday | Martech Zone
Alarobia, Jolay 10, 2013 Kelsey Cox
Optimization finday Ny fanovana dia tsy ny fifandraisan'ny olona amin'ny tsirairay fotsiny, fa ny fomba fiainany, ny asany ary ny fivarotany.
Araka ny efa fantatrao, ny fitomboan'ny fampiasana ny finday dia niely toy ny afo tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Mino ny manam-pahaizana fa hahatratra 7.3 miliara ny isan'ireo fitaovana finday amin'ny taona 2014, manamafy fa misy ny revolisiona finday. Ho an'ny mpivarotra dia ady na sidina izany: mandray ny fivezivezena ianao ary mampifanaraka ny paikadinao an-tserasera mba hifanaraka amin'ny tontolon'ny efijery marobe, na hanolotra ny fitaovam-piadianao ary hijaly amin'ny famonoana olona miadana nefa azo antoka.
Araka ny Mashable, 2013 dia "taona famoronana tranokala mamaly", izay manosika bebe kokoa ny filàn'ny tranonkala sy ny fampiharana havaozina amin'ny haben'ny efijery rehetra. Miaraka amin'ny 90% ny olona mampiasa efijery marobe misesy, ary 67% ny mpiantsena manomboka amin'ny fitaovana iray ary mamita ny fividianany amin'ny iray hafa, ny filàna traikefa an-drano dia zava-dehibe.
Ity misy fijery feno amin'ny data Mahazoa fahafaham-po:
Tags: Fivarotana finday sy tablettefanatsarana findayOptimizationmanaiky Designfamolavolana tranonkala mahaliana